Ireo Hawaiian National Park dia mankalaza ny faha-100 taonan'ny NPS
Ny valan-javaboarin'i Hawaii dia mankalaza ny faha 100 taonan'ny valan-javaboary
Two Hawaii Parks koa mankalaza ny faha-100 taonany manokana
Hawaii Volcanoes National Park. Getty Images / Douglas Peebles / Contributor
Ny National Park Service dia hankalaza ny tsingerin-taonany faha -100 tamin'ny volana aogositra 2016 ary hankalaza ny taon-jato ho an'ity taona ity ihany koa ireo valam-pirenena roa any Hawaii.
Ny volkano nasionalin'i Hawaii ao amin'ny Hawaii Island sy ny valan-javaboarin'i Haleakala ao Maui dia mamadika an-jatony amin'ny 2016.
Ho fankalazana ny fankalazana an'arivony taona, andeha hojerentsika ny zaridaina nosy Hawaiian National Park Service, monuments, tranokala sy làlana ao amin'ny Nosy Hawaiiana.
Nosy Hawaii, nosy lehibe
Ny valan-javaboarin'i Hawaii dia trano fonenan'ny valan-javaboary telo, tranokala iray sy lalana iray: Ny valan-javaboarin'i Hawaii Volcanoes, ny kianja National Historic Park Kaloko-Honokohau, Puuhonua o Honaunau National Historic Park, Puukohola Heiau National Historic Site ary ny Ala Kahakai National Historic Trail.
Ny valam-pirenena lehibe indrindra ao amin'ny Nosy Hawaiiana, Hawaii Volcanoes National Park dia misy 333,086 hektara manelanelana ny haavon'ny ranomasina ka hatrany amin'ny 13000 feet.
Io ihany no valan-javaboary Hawaii misy volkano mavitrika - roa amin'izy ireo, raha ny marina: Kilauea sy Maunaloa.
Kilauea, eo amin'ny tampon'io volom-borona io, dia mitsambikina tsy tapaka nanomboka tamin'ny taona 1983. Tamin'ny volana Aogositra 2016, niditra indray ny ranomasimbe ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny fitsidihana an'habakabaka. .
Ankoatra ny lanjany ara-jeolojika sy biôlôjika, dia manana dikany lalina amin'ny kolontsaina Hawaiiana ny faritra iray manan-danja amin'ny toerana manan-kolontsaina marobe, ary toy ny trano masin'i Pele, ny andriamanibavy firehetana Hawaiiana. Ny angano maro dia maro ny filana toa an'i Pele izay tsy azo idifiana mba hamoronana sy handrava; Ireo singa ao amin'ny toetrany dia maneho mazava tsara manerana ny kianja midadasika.
Mauanaloa (Mauna Loa) dia nipoitra tamin'ny 24 Martsa hatramin'ny 15 Aprily 1984, saingy efa tapitra hatreto ny fipoahana iray hafa ary ny tendrombohitra dia naneho maromaro ny fihetsiketsehana tato anatin'ny taona vitsivitsy.
More Hawaiian National Park Service Locations
Toy ny hoe ny habakabaka misy zavamaniry maherin'ny 1,100 hektara, zavamaniry sy biby an-dranomasina, ary heiau (temples) sy kii pohaku (petroglyphs), dia tsy fahampian'ny fahabetsaka loatra, ny valan-java-borona sy ny ranomasimbe mirefy telo kilaometatra Ny lalitra dia mirakitra alim -boaloboka sy loko kuapa (lava rock seawalls) natsangana ho fanangonana trondro, ala voajanahary ho an'ny vorona natoraly, ary toeram-ponenana voajanahary ho an'ny honu (sokatra vaventy mena).
Ny fandehanana eny amin'ny fasika fotsy ao amin'ny honko Honokohau Beach dia mety ahitana ny fahitana tsy fahita firy amin'ny tombo-kase Hawaiian mihaza masoandro. Ireo trondro roa an'i Kaloko-Honokohau, Aimakapa sy Kaloko, ary naverina indray ny loko kuapa dia mampiseho ny firoboroboan'ny Hawaiiana tany aloha, izay nanorim-ponenana an'io moron-dranomasina lava be lava-avaratra avaratr'i Kona io, nahita fiterahana sy namorona fiarahamonina.
Ny fandinihana ny anaran'ny Hawaiianina, izay midika hoe "toerana fialokalofan'ny Honaunau" amin'ny teny anglisy, dia namoaka fitoerana masina sy fiarovana tanteraka ho an'ireo mpitsoa-ponenana i Puuhonua o Honaunau, izay nandrava ny rafi-pandaminana teo aloha teo amin'ny lalànan'i Hawaiiana, ary ireo olona mandositra ny fanamelohana ho faty na ny loza.
Indray mandeha teo amin'ny rindrin'ny ranomasimbe mialokaloka any amin'ny Honaunau Bay ary nomena ny famotsoran-keloka nataon'ny mpisorony, dia afaka niverina tany amin'ny fiarahamonina izy ireo, voaaro tamin'ny alika (hery ara-panahy) avy amin'ny alii ( royalty) nalevina tao amin'ny puuhonua izay noheverina ho andriamanitra fiarovana.
Androany, ny zoron-drano manodidina ny 420 kilaometatra any atsimon'i Kona, dia mitahiry ny toerana misy ny toeram-ponenan'ny toerana, ny trondro sy ny palmie ao amin'ny toeram-ponenany, ary ny sisa tavela amin'ny tanànan'i Kiilae, izay manolotra ny mijery ny lasa teo aloha tany Hawaii.
Puukohola Heiau National Historic Site. Sary an'i John Fischer
Ny mpitsidika an'io tempoly masiaka io, iray amin'ireo rafitra masina lehibe indrindra sy farany mifandraika amin'ny fanamboaran-trano natsangana tany Hawaii, dia atolotra avy hatrany ny fanamafisana ny fanirian'ny Mpanjaka Kamehameha The Great sy ny fahitana ny haitao fanta-daza momba ny haitao tany aloha.
Ny fanorenana ny heiau dia nanomboka tamin'ny 1790 tamin'ny baiko avy amin'i Kamehameha ilay Great, nikatsaka ny hanome voninahitra an'i God Kukailimoku andriamanitry ny fianakaviany ary hahatsapa ny faminaniana fa ny fahavitan'ny tempoly dia hitarika ho amin'ny firaisany sy ny fitondrany ny Nosy Hawaiiana.
Ny heiau, izay mijoro eo amin'ny 22 metatra eo ho eo, ary misy rindrina 16 ka hatramin'ny 20 metatra ny haavony, dia vita tao anatin'ny herintaona tsy nampiasaina ny fako.
Ala Kahakai National Trail
Ny dian-tongotr'ireo mpitsidika amin'izao andro izao mandeha amin'ny ala Kahakai National Trail dia manaraka ny diany isan-kerinandro ho an'ny Hawaiiana tany aloha izay nampiasa azy io mba handehanana anelanelan'ny tanàna kely. Mihoatra ny 175 kilaometatra manontolo, ny lalan-kely dia manaraka ny sisin-tany amoron-dranomasina, avy any amin'ny tendrony avaratr'i Hawaii, nosy lehibe, atsimo eo amin'ny Kohala sy Kona, ary eo amin'ny farany atsimon'i Ka Lae, mankany amin'ny sisin-tany avaratra indrindra an'ny valan-javaboarin'i Hawaii Volcanoes .
Na dia mbola tsy naverina tamin'ny lalan-dàlana aza izy ireo, ny ampahany amin'ny Ala Kahakai dia azon'ny daholobe atao amin'ny alàlan'i Anaehoomalu Bay, Puukohola Heiau National Historic Site ary Park National Historic Park Kaloko-Honokohau. Ireo segondra amin'ny lalana dia azo jerena ao amin'ny faritra manodidina ny valan-javaboary Volkanoes Volcanoes, saingy aoka ho azo antoka ny miresaka amin'ny mpitaingina momba ny toetrandro sy ny toetr'andro, ary ny toeram-pivarotana, alohan'ny handehanana.
Oahu Toeram-panompoana Nasionaly Oahu
USS Arizona Memorial. Sary an'i John Fischer
Ny nosy Oahu dia trano fonenam-pirenena roa: ny Ady Lehibe Faharoa any amin'ny Monument National Nationale sy ny Monument National National Honouluiuli.
Ny Ady Lehibe Faharoa any amin'ny Monument National Nationale
Tao anatin'ny 75 taona nanomboka tamin'ny 7 Desambra 1941, fanafihana ny tobin'ny tafika an-dranomasina Amerikana izay nametraka an'i Amerika ho Ady Lehibe Faharoa, lasa lasibatry ny fiheverana goavana amin'ny vidin'ny olombelona ny ady ary ny ankamaroan'ny olona fanantenana maharitra amin'ny tontolo milamina.
Ny Ady Lehibe Faharoa any amin'ny Monasim-pirenena Pasifika ao Pearl Harbor dia trano fonenan'ny Memorial USS Arizona - izay mifantoka amin'ny tapany afovoan'ilay andian-jatony voarakotra - fahatsiarovana ny USS Utah sy ny USS Oklahoma , ary ireo tranonkala hafa ao amin'ny seranan-tsambo Ford Island ary Fitaovam-piadiana taloha momba ny fanafihana.
Ny vohikala mpiara-miombon'antoka amin'ny tsangambaton'ny NPS, miaraka amin'ny tarika Pearl Harbor Historic Sites, dia ahitana ny Fahatsiarovana Missouri, ny USS Bowfin Submarine Museum & Park, ary ny Museum Aviation Pacific.
Ny ankamaroan'ny lagoon - dia nomena anarana hoe Puuloa ("havoana lava") ary Wai Momi ("ranom-perla") ny anarana Hawaiianina - dia mbola toeram-ponenan'ny US Navy sy Air Force, izay fantatra ankehitriny hoe Joint Base Pearl Harbor-Hickam.
Honolulu National Monument
Na dia mbola tsy misokatra ho an'ny besinimaro aza ny tanjon'ny National Park Service Hawaiianina ho an'ny seranam-piaramanidina dia mikendry ny hitazona tsangam-bato manan-tantara eo amin'ny tantaran'i Amerika, raha mbola maizina sy mahatsiravina, mendrika ny fahatsiarovana sy ny fahalalana amin'ny taranaka ho avy.
Namoaka tsangambato nasionalin'ny Filoha Barack Obama tamin'ny febroary 2015, Honouliuli no toeram-ponenana tao Hawaee, izay lehibe indrindra sy lava indrindra tao amin'ny tobim-pitsaboana iraisam-pirenen'ny ady lehibe faharoa tao Hawaii.
Nandritra ny telo taona niasana, nanomboka tamin'ny 1943 ka hatramin'ny 1946, ny Honouliuli Internment Camp dia nigadra efatra teo ho eo tamin'ny Japone, Koreana, Okinawan, Taiwaney, Alemana ary Italiana razambe fony gadra.
Maro amin'ireo gadra no olona teratany Japoney-Amerikana monina any Hawaii, notontosaina tany Honouliuli raha mbola niandry ny famindrana tany amin'ny tobin'ny sendikàn'i Etazonia Mainland. Rehefa manokatra izy dia hizara ny tantaran'ny iraisam-pirenena, ny lalàna miaramila ary ny traikefa amin'ny ady an-trano any Hawaii nandritra ny Ady Lehibe II ny Monument Honumniuli National.
Ny toerana misy ny fonja nasionalin'ny Maui
Ny nosy Maui dia trano iray ho an'ny valan-java-pirenena iray, ny National Park Haleakala.
Tendrombohitra volkano iray miavaka satria masina izany; Haleakala dia manankarena tantara momba ny kolontsaina hawaiianina tany aloha ary ny fifandraisana eo amin'ny aina (land) sy kanaka maoli (Hawaiian teraka).
Voalohany amin'ny tongotr'ireo razambe, ny lalana mankany amin'ny valan-javaboary dia mitarika ireo mpitsidika amin'ny alàlan'ny tontolo samihafa - ala maitso mavana, dessin-dite mena ary ala maitso matevina, anisan'izy ireo - ny andro sy ny hatsiaka dia miditra any amin'ny tontolo voajanahary.
Ny fikojakojana ny fiposahan'ny masoandro sy ny filentehany avy eo amin'ny havoanan'i Haleakala dia 10,023 metatra ambonin'ny haavon'ny haavony - ny tampon'I Maui avo indrindra - dia fombam-pivavahana fotsiny ho an'ireo mpitsidika nosy voalohany.
Manodidina ny 33.200 hektara, avy any amin'ny vondrom-piarahamonin'ny ranomasina ao Kaupo ao amin'ny morontsiraka atsimo atsinanan'i Maui mankany amin'ny rivodoza rivodoza faux caldera, ny Haleakala National Park, tahaka ireo toerana lehibe indrindra an'ny NPS, dia valisoa tena mamaly ny mpitsidika. Tahaka ny NPS, nankalaza ny faha- 100 taonany tamin'ity taona ity ihany koa ny valanjavaboary.
Toerana misy ny toeram-pitsaboana ao Moloka`i
Kalaupapa Peninsula. Sary an'i John Fischer
Ny nosy Moloka`i dia trano iray ao amin'ny valam-pirenena iray: Kalaupapa National Historical Park.
Nandritra ny zato taona mahery, ny tranokalan'ny fitsaboana ho an'ireo marary vokatry ny aretin'i Hansen (habokana), ilay onjampeo mahaliana, mahatalanjona any Kalaupapa dia manome voninahitra ny fiaretan'ny fanahin'olombelona ary mampahatsiahy ny mpitsidika ny toko iray mampahory ao amin'ny tantaran'i Hawaii.
Tamin'ny janoary 1866, mararin'ny hôpitaly Hansen ny marary nalaina tamin'ny fianakaviany, nisaraka tamin'ny fiarahamonina, ary nalefa tany Kalaupapa, voarohiran'ny hetsiky ny governemanta vaovao vao haingana izay mitaky ny fisorohana ny rehetra voan'ny aretina tsy azo sitranina sy aretina.
Tamin'ny famaranana ny taona 1969, marobe ny marary 8000 no voatery nifindra monina tany Kalaupapa, niparitaka eran'izao tontolo izao, tamin'ny alàlan'ny fiaramanidin'ny ranomasimbe, ary manodidina ny lakandrano an-dranomasina 3,000.
Ny marary vitsivitsy dia mbola mitoetra, amin'ny safidy, ao Kalaupapa, izay tsy misy afa-tsy ny fiaramanidina mule na fitsangantsanganana mitsidika ny lakandranon'i sambony, na amin'ny fiaramanidina izay miondrika eo amin'ny toeram-pialan-tsambo kely.
Ny fidirana ao amin'ny Park dia voafetra ho mpitsidika 100 isan'andro ary tsy maintsy alamina ny fitsidihana rehetra. Ny fahafahana hianatra momba ny tantaran'ny mponina sy ny mponina, ary ny hery voajanahary izay namorona ny saikinosy manintona dia mendrika ny ezaka.
Andro fitsidihana any amin'ny Nosy Lana'i
Ny Fetin'ny Lele any Lahaina Maui Hawaii
Fety isan-taona any Hawaii Hatramin'ny Janoary ka hatramin'ny Desambra
10 amin'ireo toeram-piompiana biby fiompy tsara indrindra sy ny arabe an-dalamben'i Hawaii
Zavatra tsy tokony hatao rehefa mitsidika an'i Hawaii
Torolalana ho an'ny boky tsara indrindra momba ny angano sy ny lejiona Hawaiiana
Tanah Rata ao amin'ny The Cameron Highlands, Malezia
Inona no tokony hataonao raha lany ny entanao?
Fivarotana sy tranom-barotra nasionalista nosy Gem
Karatra fandoavam-bola, karatra karta, ary vola any Rosia
Fomba hankalaza ny Andron'ny Tany ao St. Louis
Shake Shack Las Vegas Ao New York-New York Resort And Casino
7 Zavamaniry mahatalanjona mijanona eo alohan'ny hahafatesanao
Fihetsiketsehana any Scandinavia: Afaka miala sasatra any Skandinavia ve aho?
Sarintanin'ny Tanànan'i Eoropa miaraka amin'ny fiarandalamby sy fiarandalamby
Aiza no ahitana trano fivarotana sy trano fivarotana any Roma
Novambra tao Toronto
Ireo tanàn-dehibe 4 manan-tantara indrindra any Colorado